27 CSS iyo HTML sliders si loo isbarbar dhigo sawirada, kaararka iyo waxyaabo kaloo badan | Abuurista khadka tooska ah
Waxaan sii wadaynaa wareegga CSS iyo HTML code ee laga hirgelin karo degelkeenna si loo siiyo taabashadaas gaarka ah ee lagu kala soocayo inta kale. Thanks to + c xakamaynta oo lagu daray + v xakameynta aan awoodno ku hayso koodhkeena gacanta oo diyaarin doona webka in lagu daabaco horumarka ka dib maalmo ama usbuucyo tijaabo ah.
Hadda waa waqtigii 27 slider ee HTML iyo CSS taas oo noo oggolaan doonta inaan ku diyaarinno meeshaas oo sida caadiga ah aan ku dhexgalno waxyaabo badan oo ku jira dhowr pixels laba jibbaaran. Dhajiyeyaashaani waxay u dhexeeyaan kaarka, isbarbardhig, shaashad buuxda, jawaab celin ah iyo kan ugu fudud, laakiin isla markaa sidoo kale aad u qurux badan. Waxaan la soconeynaa 27 sliders oo aan cidna uga hari doonin, gaar ahaan macaamilka ama isticmaalaha soo maraya boggaaga si aad u aqriso waxyaabaha, u iibsato shey ama aad si fudud u isticmaasho isbarbardhiga isbarbardhiga si aad uhesho sawir kahor iyo kadib.
1 Shaashadda kaararka
2 Kaarka macluumaadka
3 Sawirka isbarbardhiga
5 Saddex-lakab isbarbardhigga sawirka sawir
6 Vanilla JS Sawirka Sawirka
7 Kala jajab shaashad muuqaal ahaan
8 Wareegtada shaashadda oo buuxa
9 Slider Horizontal la parallax
10 Sifeeyaha 3D muuqaal jilicsan
11 Geesi sawir-qaade buuxa
12 VELO.JS slider leh xuduudo
13 Jawaab-celin CSS jawaab-celin toos ah leh thumbnails
14 Sanduuqa siibbada sawirka
15 Motion blur oo leh miirayaasha SVG
16 Sawir qaade
17 Sawirqaade sawir leh qaababka SVG
18 Wareegtada lakabka fudud
19 Saafi daahir CSS
20 Cupcakes kaliya CSS slider
21 Saamaynta animation Slider
22 Jeex jeex
24 Soo bixitaanka
25 Slider leh saameyn fiiqan
26 Slider leh muuqaalka muuqaalka
27 Kala wareejinta Sliders
Wareejiyahaani waa Faa'iido weyn waana hubaal inaad ku aragtay degello fara badan oo sawirro ka hor iyo ka dib la barbar dhigayo bar taagan oo si siman u soo boodaya. Waa caawimaad weyn isbarbar dhigyada, sidaa darteed waxaan kadhignay mid kamid ah waxyaabaha lagama maarmaanka ah ee kujira liistadaas.
Saddex-lakab isbarbardhigga sawirka sawir
Vanilla JS Sawirka Sawirka
Kala jajab shaashad muuqaal ahaan
Wareegtada shaashadda oo buuxa
Slider Horizontal la parallax
Wixii ah tageerayaasha parallax waxay saameyn ku yeeshaan isbadalkan leh Swiper.js, HTML iyo CSS. Marka laga reebo inaan awood u leexan karno labada badhan ee ku yaal dhinac kasta, dhinaca midig waxaan ku leenahay dhammaan sawirada carousel dhameystiran. Muuqaal muuqaal oo kala duwan oo tayo sare leh oo aan ka tagi doonin qof kasta oo booqda degelkeenna dan la'aan.
Sifeeyaha 3D muuqaal jilicsan
Geesi sawir-qaade buuxa
VELO.JS slider leh xuduudo
Mid ka mid ah waxyaabaha muhiimka ah sida isbadal shaashad buuxda leh oo si animation kala guur ah oo fudud si fudud. Waxaan kugula talineynaa inaad u tagto si aad u aragto adigoo shaqeynaya si aad u bilowdo inaad ka fikirto sidii aad uga hirgelin lahayd shabakada. Adeegso saamaynta xawaaraha Si loo hagaajiyo animation-kaas oo adeegsanaya badhannada fallaarta, guji marinka iyo xitaa wareejinta, Si fudud u dhammaystiran.
Jawaab-celin CSS jawaab-celin toos ah leh thumbnails
Waxaan u dhaqaaqeynaa gawaarida Ka jawaab celinta CSS ee mobilada tayo weyn sida tan oo kale. Waxaad ku yeelan doontaa taxane sawirro ah taxane ah dhinaca midig oo markii la riixo bilaabi doona animation dhicitaan toosan. Saameyn weyn oo adeegsaneysa CSS kaliya si looga tago slider kan ugu fiican liiskan.
Sanduuqa siibbada sawirka
Motion blur oo leh miirayaasha SVG
Sawirqaade sawir leh qaababka SVG
Mid kale oo ka mid ah tijaabooyinkaas oo isku dayaya inay qaado qaababka svg si loo abuuro qaar ka mid ah sawirrada maaskaro ee loo yaqaan 'CSS slider'. Waxay soo saartaa saameyn ba'an oo aad u xun oo leh dhammaystir weyn. Mid kale oo ka mid ah kuwa isdabajooga ah si ay ugu kiciyaan dareenka wanaagsan booqdaha degelkeena.
Wareegtada lakabka fudud
Saafi daahir CSS
Mid kale oo ka mid ah taraafikada ugu fudud oo nadiif ah CSS. Mid ka mid ah faa'iidooyinkeeda in lagu rido hoose bidix taxane ah dhibco Taasi waxay u adeegi doontaa sida badhannada si loo gaaro mid kasta oo ka mid ah sawirrada ina hor mari doona iyada oo aan wax animation gaar ah lahayn.
Cupcakes kaliya CSS slider
El slider ugu macaan liiska iyo in kaliya ay ku jirto CSS iyo HTML. Waa mid ka mid ah kuwa ugu khaaska ah liiska oo dhan inuu ku yeesho dhinaca midig kala duwanaanshaha kaladuwan ee keega. Dhagsii mid ka mid ah iyo koob keega ayaa u muuqda animation cajiib ah oo ku dhammaada saameyn weyn oo soo kabasho ah. Mid ka mid ah kuwa ugu fiican shaki la'aan.
Saamaynta animation Slider
Un wareejinta wareejinta ee adeegsata fasal ku dar fudud taasna waxaa lagu gartaa animations aad u siman si ay u noqdaan mid ka mid ah kuwa ugu cadcad liiskan. Haddii aad rabto inaad ku kala soocdo nooca mobilada ee shabakadda, waa mid ka mid ah waxyaabaha lagama maarmaanka ah. Aragti weyn.
Iyadoo a Habka ugu yar ee loo yaqaan 'slider' ayaa lagu soo bandhigayaa taas oo qayb kasta oo sawirka ka mid ah ay kula soo baxeyso isbarbar dhig kasta. Hal abuur badan oo ka duwan waxa ka muuqda liiska sliders oo taagan meesheeda.
Slider leh saameyn fiiqan
Slider leh muuqaalka muuqaalka
Slider GSAP oo leh horudhac ah bogagga soo socda taas ayaa loo soo bandhigi doonaa isticmaalaha. Ku habboon ku habboonaynta moodel ama degel websaydh ah.
Kala wareejinta Sliders
Waxaan liiska ku dhamaynaynaa a slider tayo sare leh oo leh saameyn bambooyin ah iyo animations taxane ah oo taabashadaas gaarka ah kahelaya degelkeena. Saamaynta parallax waa la hawl gelin karaa.
Ha moogaan tan liis kale oo CSS ah badhamada.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Technologies » CSS » 27 HTML iyo CSS slider si ay u siiyaan shabakadaada taabashadaas gaarka ah
Baro sameynta qaababka astaamaha 'Indesign' oo si xirfadaysan ula jeesjeeso